Hooggantootni fi hawaasni miidhamtoota balaa boombiif dhiiga arjooman - BBC News Afaan Oromoo
Hooggantootni fi hawaasni miidhamtoota balaa boombiif dhiiga arjooman
Image copyright EPRDF official
Goodayyaa suuraa Ministira muummee dabalatee hooggantootnifi haawasni miidhamtootaaf dhiifga gumaachan
Dargaggeessi ganna 23, Magarsaa Beenyaa, namoota balaa boombii addabaabayii Masqalaa Sanbata darbeen miidhamee bakka waldhaanamaa jirutti Miistirri muummee dhufanii isa gaafachuun isaanii isa abdachiisu hima.
''Dr Abiyy ittaanaa isaanii wajjin dhufanii yoo nu gaafatan gammachuu guddaatu natti dhagaahame'' jedha Magarsaan. Qabsoon kun gocha kanaan gufatee akka booddetti hin deebines dargaggoon kun gaafateera.
Namootni akka magarsaa balaa kanaan miidhaman balaa irra gaherraa akka bayyanataniif hanqinni dhiigaa danqaa akka hin taaneef qaamoleen hawaasaa kaka'uumsa isaaniin dhiiga arjoomaa jiru.
Ministirri muummee Dr. Abiyyi Ahimadis namoota balaa kanaan miidhaman jajjabeessuuf baankii dhiigaa biyyoolessatti dhiiga kennaniiru.
''Warra dhiigni isaanii dhangala'e ijji keenya argeera waan ta'eef kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti argamnu ganama sa'atii lamatti walbeellamnee, hospitaalatti namoota madaawan ilaallee dhiigaa keenya laanneefiirra'' jedhan hoogganaan waajiraa koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Lencoo.
Namoonni dhiiga gumaachuuf bakka sana turan hedduu akka turan kan dubbatan Dr. Nagariin, barattootni, dargaggoonnii, Isportessitotnii fi qaamoleen hawaasaa biroon namoota, jaalalaafi tokkummaa biyya kaanaaf, dhiifama walii godhuu deeggaruuf jecha warra dhiigni isaanii dhangala'eef dhiiga arjoomu dubbataniiru.
''Yeroon kun yeroo of kennanii biyya ofii taajaajilan, dhiiga ofii kennanii lubbuu oolchan malee yeroo hammeenyaan dhiiga nama qulqulluu dhangalaasan mitis'' jedhaniiru.
FBI haleellaa boombii Finfinnee qorachuu eegale
Finfinnee: Boombii dhoheen namni lama yoo du'u, sadii haala yaaddessaa keessa jiru